!...* ဆောင်းနှင်းရွက် တေးခတ်သံ *...!: အိုင်ဖုန်း ဖိုက် အလှူခံပါတယ်
Saung Hn!n Ywat
Good & Bad , half by half..! I am always trying to beagood girl . But (No one is perfect) တစ်ခါတစ်လေ ရယ်စရာတွေ အရမ်း ပြောတတ်သလို ၊ တစ်ခါတစ်လေ ခပ်တည်တည် နဲ့ ။
နေ့စဉ် နှင့် အမျှ ဘ၀ ရဲ့ သင်ခန်းစာတွေ သင်ယူရင်း တစ်နေ့ ၂၅ နာရီ နဲ့ မလောက်ဘဲ အလုပ်တွေရှုပ်ပြီး အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် ကြိုးစားနေတဲ့ သာမန် မိန်းကလေး တစ်ယောက်ပါ ..
I send my misses
to pass them to you.;
against your face.,
That's when ..,
ပြင်နေပါသှ် ...း)
အကုန်ရေးသည် . ။
:.. တွေးမိတွေးရာ ..: (11)
:.. စိတ်ခံစားမှု့ ..: (10)
:.. အမှတ်တရ ..: (8)
:.. စပ်မိစပ်ရာ ..: (6)
:.. တဂ် ..: (5)
:.. ခံစားမှု့..: (3)
:.. သီချင်း ..: (3)
:.. အတွေ့အကြုံ ..: (3)
:.. အမြင်လေး တစ်ခု ..: (3)
:.. ၀တ္ထုတို ..: (3)
:.. ကဗျာ ..: (2)
:.. ဗဟုသုတ ..: (2)
:.. သင်္ကြန် ..: (2)
:.. အလွှဲ များ ..: (2)
:.. မွေးနေ့ ..: (2)
:.. တက္ကသိုလ် ဘ၀ ..: (1)
:.. မွေးရပ်မြေ သို့ တစ်ခေါက် ..: (1)
:.. သံစဉ်များ ..:
--- ရောင်းရင်းများ --- 99 SaNay KiKi Nge Naing KP-3 နည်းပညာ Phyo Maw Waing ကို စိုးမိုး ကို ညီညီကျော် ကို ညီညီကျော် သံစဉ် ကို ဖိုးစိန် ကို မျိုးထက် ကို ရီနိုမာန် ကို လူလိန် ကို ပီတာ ကို လူထွေး ကိုရင်နော်ခင်လေးငယ်လေး သံလွင် HERO ကို သက်ပိုင်သူ တာရာမင်းဝေ တောင်ပေါ်သား ကိုးကားရာ ဂျပန်ကောင်လေး ကို ဖိုးဂျယ် နန်းညီ ညရဲ့ကောင်းကင် ညီနေမင်း ဗီလိန် ဏီကင်း တလနွန် ဖိုးသင်္ကြန် ဗညားရှိန် ချော မင်းကို ချစ်တဲ့သူ မိုးကုတ်သား မိုးခါး မနောသား ရန်ကုန်သား လင်းဦး(စိတ်ပညာ) သက်တန့်ချို သားကြီး သီင်္ဂီကျော် သီဟသစ် အဆိပ်ခွက် အဖြူရောင်နတ်သမီး ဦးဉာဏ် ဦးရှင်ကြီး ကောင်းကင်ပြာ ညမီးအိမ် ရွာသားလေး YTU ဂျေဂျူပိုင် ဆောင်းချမ်းမိုး ဇော် 357 မေတ္တာရောင်ပြန် မေသူ မေလေး value="http://nyilinnthit.blogspot.com/" target="_blank" />ညီလင်းသစ် ရေတမာ ဝေမင်းအိမ် နွေးနွေးသဲမွန် ဝါဝါခိုင်မင်း ကြယ်ဖြူစင် မြစ်ကျိုးအင်း မြရေလျဉ် နှင်းဆီချစ်သူ နှင်းဆီဖြူ ဏီလင်းညို ရွှေစင်ဦး ညခင်းရဲ့ လမင်း ကောင်းကင်ကို စန္ဒကူး ခင်ဦးမေ မမ လုလု အိမ်ရှင်မ စုဗူးအိမ် ဂျာမုန်းဒန် ယွန်း T T Sweet Smoke & Spice ဇောင်း အိမ် အိုက်ခီလောက် ပျူနိုင်ငံ ငပေါများ ဂေဟာ လုံးတုံး နေဇော်လင်း ခုနှစ်စင်ကြယ်
--- တွေ့ဆုံခဲ့ကြသူများ --- Phyo Maw Waing ကို စိုးမိုး ကို ညီညီကျော် ကို ညီညီကျော် သံစဉ် ကို ဖိုးစိန် လင်းခေတ် ဒီနို ကို မျိုးထက် ကို ရီနိုမာန် ကို လူလိန် သံလွင် HERO ကို သက်ပိုင်သူ တောင်ပေါ်သား ဂျပန်ကောင်လေး မောင်အေးချမ်း ညရဲ့ကောင်းကင် ဗီလိန် ငချမ်းကောင် ဏီကင်း တလနွန် ဖိုးသင်္ကြန် J-P-Z မင်းကို ချစ်တဲ့သူ မိုးကုတ်သား မိုးခါး သီဟသစ် အဆိပ်ခွက် ကိုတီအန်တီ ဦးဉာဏ် ဦးရှင်ကြီး ကောင်းကင်ပြာ ဆောင်းချမ်းမိုး မေတ္တာရောင်ပြန် မေသူ မေလေး ရေတမာ ဝေမင်းအိမ် နွေးနွေးသဲမွန် ဝါဝါခိုင်မင်း ကြယ်ဖြူစင် မြရေလျဉ် နှင်းဆီချစ်သူ အိမ်မက်ချစ်သူ နှင်းဆီဖြူ နိုဘယ်မိုး
...* သွားနေကြ *...
ကျန်းမာရေး ရာ အဖြာဖြာ
စားကြမယ် ဟေ့ ၊ ကောင်းကောင်း
ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ video site လေးတစ်ခု
မြန်မာ TV Channel
Evy_ Little Pigeonhole
Myanmar food house (Sunny)
ကိုဆူးသစ် ရဲ့ အဖြူရောင်လမ်းကလေး
ဦးNyan ရဲ့ မြင်းမိုရ်ဦး
ရန်ရန် ရဲ့ အိုအေစစ်
ကိုဘို ရဲ့ WONDERFUL UNIVERSE
မအိန္ဒြာ ရဲ့ စာတစ်ချို့
ဝေမင်းအိမ် ရဲ့ စာပေများ
မျှဝေမှုတို့ စုစည်းရာ (အင်္ဂါဟူး)
ဘကျောက် ရဲ့ ရွှေရတုမှတ်တမ်း
ကိုဖိုးချမ်း ရဲ့ ရပ်ဝန်း
Nay Yan Thaw and Art
ရသ ဝတ္ထုတို ရွေးချယ်ခြင်း
၀ါဝါ ရဲ့ စာပေများ
မက်မက် ရဲ့ အိပ်မက်ပုံပြင်
မရို့စ် ရဲ့ နေရာလေးတစ်ခု
•10/03/2012 12:28:00 PM
အိုင်ဖုန်း .. အိုင်ဖုန်း ... တော်တော် အလုပ်ရှုပ် ၊ စိတ်ရှုပ်ဖို့ကောင်း တဲ့ ဒီအိုင်ဖုန်း ..
ပြောရမယ်ဆိုရင် လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ နှစ် ကျော်ကနေ စပြောရမယ် .. သုံးနေကျ ဆိုနီ ဖုန်းလေး
အ၀တ်လျှော်စက်ထဲ အိပ်ယာခင်းလျှော်ရင်း ရောက်သွားရာကနေ ဒီ ဖုန်းကို ၀ယ်မိလိုက်ရာက ဇာတ်လမ်းက စတာပဲ ။ ဖုန်း ပျက်သွားတော့ ဘာဖုန်းဝယ်ရမလဲ တော်တော်စဉ်းစားရတယ် .. အိုင်ဖုန်း ဖိုးလေးပဲ ၀ယ်ရမလား ၊ ဖိုးအက်စ် လေးကို စောင့်ရမလား ၊ တစ်ခြား ဖုန်းပဲ ၀ယ်ရမလား ၊ ကဲ .. မသေချာတဲ့ ဖိုးအက်စ်ကို စောင့်ဖို့ အချိန်မရှိဘူး .. ဖိုးလေးပဲ ၀ယ်လိုက်ပါမယ် စိတ်ဆုံးဖြတ်လိုက်ရာက စတားဟက် ဆိုင်မှာ သွားစုံစမ်းတော့ မဆိုးပါဘူး .. အားလုံး အပြီးအစီး ၂၃၀ လောက် နဲ့ မိနစ် ၃၀၀ ပလန် ဆို တစ်လ ၆၀ ကျပ် လောက်ဆိုတော့ မဆိုးဘူးပေါ့ .. အဲ့လိုနဲ့ စနေ၊ တနင်္ဂနွေ ရောက်တော့ စတားဟက်စင်တာကြီး မှာ သွားလျှောက်တာပေါ့ .. ၀င်ဝင်ချင်း ကျူ ယူမယ်လုပ်တော့ ကောင်တာ ကောင်လေးက ပတ်စ်တောင်းလို့ ပတ်စ်ပေးလိုက်တော့ အဲ့ ကောင်လေး ပြောလိုက်တာက " ကျောင်းသား ပတ်စ်နဲ့ အိုင်ဖုန်း ၀ယ်ရင် ဒီပိုဆစ် ၈၀၀ ပေးရပါမယ် တဲ့ ၊ " ဟမ် .. ငါသိတာ ၂၀၀ လားလို့လေ ဆိုတော့ အဲ့ဒါ အိုင်ဖုန်းက လွဲလို့ တစ်ခြားဖုန်းတွေ က အဲ့လိုပါတဲ့ .. အို ပြောမနေနဲ့ လူက ရေရေလည်လည် တင်းပြီး ... ဒေါသတွေ အမြှုပ်လိုက်ထွက် ၊ အသွားကြီး သွားပြီးမှ ... စိတ်တွေ တိုလိုက်တာ ဆိုတာ မပြောချင်ဘူး .. မပြောချင်ဘူး .. အဲ့နေ့ အကြောင်း ဆက်မပြောတော့ဘူး .. အိုင်ဖုန်း ကိစ္စ ဆက်ပြောမယ် ..
ကဲ .. အဲ့ဒါနဲ့ ကိုယ်နဲ့ သိတဲ့ အမ ဆီ ပြောပြီး အမ အဲ့လို အဲ့လို ဖြစ်လို့ ဖုန်းလျှောက်ချင်တယ်ပြောတော့ သူက ၀မ်းသာအားရပဲ .. စတားဟက်မှာ ဖုန်း ၃ လုံး လျှောက်တယ်ဆိုရင် 25 % Discount လား မသိဘူး ရတယ်ဆိုတော့ သူတို့ လင်မယားနဲ့ ကိုယ်နဲ့ပေါင်းရင် သူတို့ ရပြီးသား Discount % က တိုးလာမှာ ဆိုတော့ သူလည်း အဆင်ပြေ ၊ ကိုယ်လည်း အဆင်ပြေ ပေါ့ .. ဟုတ်ပြီ ဒါဆို မိနစ် ၃၀၀ ပလန် .. နောက်တစ်ပတ် စနေ၊ တနင်္ဂနွေ တစ်ရက်ရက်သွားကြတယ်ပေါ့ကွယ် ..
၀ယ်ပြီး ၄ ရက်လောက်အထိ အဲ့ဖုန်းကို မကလိနိုင်အားသေးလို့ ၀ယ်လာတဲ့ ဖုန်းဘူးလေးအတိုင်း စားပွဲခုံမှာ ခဏအလှပြထားလိုက်သေးပါတယ် ။ နောက် ၅ ရက်မြောက်တဲ့ နေ့မှ စပြီး ဗူးဖွင့် ၊ အားသွင်း ၊ ဖုန်းနံပါတ်တွေ ထည့် ကလိပေါ့ .. ဟဲဟဲ .. သိပ်မကြာပါဘူး .. နောက်နေ့ ဖုန်းပြောနေရင်း ဖုန်းက လုံးဝ ဘယ်လို ဖွင့်ဖွင့် ဖွင့်လို့မရတော့ဘူး .. ဒါပေမယ့် နောက် ၁ နာရီ လောက် နေတော့ သူ့ဘာသာ သူ ပြန်ဖွင့်လာတယ် .. သြော် .. ငါ ကလိတာများ များသွားလို့လား မသိဘူးပေါ့ .. နောက် တစ်ခါ ထပ်ဖြစ်ပြီး .. အပလီကေးရှင်းတွေ ဖွင့်တိုင်း ပြန် ပြန်ပိတ်သွားလိုက် ၊ ဟန်းသွားလိုက်နဲ့ တစ်ခုခုတော့ လွဲနေပြီ ဆိုတာ သိနေတယ် .. အဲ့ဒါနဲ့ ကိုယ့်ကို လျှောက်ပေးတဲ့ အမ ကို ဖုန်းဆက် ၊ အကျိုးအကြောင်း ပြောပြပြီး စင်တာမှာ သွားလဲချင်တဲ့ အကြောင်း ပြောပြတော့ လိုက်ခဲ့ပေးမယ်ဆိုလို့ တော်သေးတာပေါ့နော် .. ဆိုင်ရောက်တော့ သူတို့ စမ်းရင်းနဲ့ပဲ ဖုန်းက ဟန်း ဟန်း နေတော့ အသစ် တစ်လုံး လဲပေးလိုက်ပါတယ် ..
ကဲ .. ပထမ လ ဖုန်းဘေလ် လာပြီ .. ကြည့်လိုက်တော့ ဒစ်စကောင့် မပါဘူး .. ဖုန်းဘေလ်က နောက်ဆုံးနေ့လည်း ဖြစ်ပြန် လျှောက်ပေးတဲ့ အမကိုလည်း ထပ်ပြီး အနှောင့်အယှက် မပေးချင်တော့တာနဲ့ .. သွားဆောင်လိုက်ပါတယ် .. ဒါပေမယ့် စိတ်ထဲမှာ နဲနဲတော့ ဘ၀င်မကျတာနဲ့ လျှောက်ပေးတဲ့ အမကို ဖုန်းဆက်မေးတော့ သူတို့ဆီမှာ ဒစ်စကောင့် ပါတယ်တဲ့ .. "အမှန်ဆို ပါရမှာပေါ့ နောက်လ ဘေလ်လည်း အဲ့လိုလာရင် မသွင်းလိုက်နဲ့ စင်တာကို လှမ်းပြောပေးမယ် ဆိုတာနဲ့ " အင်း.. ရှိစေတော့ .. ကဲ နောက်လ ဖုန်းဘေလ် လည်း အဲ့အတိုင်းပဲ .. ဒါနဲ့ ဖုန်းဆက်ပြောတော့ လူကိုယ်တိုင်လာပြီး ဘေလ်ပါယူခဲ့ပါဆိုလို့ ကဲ သွားလိုက်ကြပေအုံးပေါ့ ... သိတဲ့ အတိုင်း စနေ၊ တနင်္ဂနွေ ဆိုတော့ ကျူပေအုံးပေါ့ .. လုပ်ပေးတဲ့ မမ လင်မယား စိတ်ရှုပ် ၊ မရှုပ် တော့ မသိဘူး .. ဆောင်းနှင်းတော့ တော်တော်စိတ်ရှုပ်ပြီး ငါနဲ့ ဒီဖုန်းနဲ့တော့ ရှေ့လျှောက် ဘယ်လို စခန်းသွားရအုံးမလဲ မသိလို့ အဲ့ကတည်း စိတ်ထဲမှာ တွေးမိလိုက်ပါသေးတယ် .. ကဲ .. ကိုယ့် နံပါတ် အလှည့် ရောက်ပြီ .. ကောင်တာကိုမေးတော့ လိပ်စာ ကြောင့်ပါတဲ့ .. နာမည် အတူတူနဲ့ လျှောက်ထားပေမယ့် လိပ်စာ မတူရင် မရပါဘူးတဲ့ .. လိပ်စာ အတူတူဆိုရင် discount ရပါတယ်တဲ့ .. တကယ်ဆို အဲ့ဒါ အဓိပယ် မရှိတာ .. စိတ်ထဲမှာတော့ ကျလိ၊ ကျလိပဲ .. ထားပါတော့ .. အဓိပယ် ရှိတာ ၊ မရှိတာ .. အဲ့ဒါနဲ့ အဲ့လ ပိုကောက်ထားတဲ့ ပိုက်ဆံကို ပြန်အမ်းပေးပြီး မမ တို့ လိပ်စာပဲ ပြောင်းခဲ့လိုက်တယ် ..
((လူ့သဘာဝလားမသိဘူး .. မရှိခင်တုန်းကတော့ သူများတွေ အိုင်၊ အိုင် ဆိုလို့ အရမ်းလိုချင်တယ် .. ရလည်းပြီးရော စကရင် သေးသေးလေးမှာ အာရုံစိုက်ရလွန်းလို့ အရမ်း မကြိုက်တော့ပြန်ဘူး ..))
သိပ်မကြာပါဘူး .. နောက် ၄ လ လောက်နေတော့ MRT စီးရင် တိုပါရိုး ဘူတာ အရောက် လူတွေ တိုးတိုက်ထွက်ရာက လူလည်းလွင့်၊ ဖုန်းကလက်ထဲကနေလွတ်ထွက်သွားပြီး platform gap ကနေ MRT track ပေါ် ကို ရောက်သွားတော့ လူမှာ ခဏတာ နှလုံး ရောဂါ ရသွားပြန်တယ် .. ကြည့်လိုက်တော့ ရထားဘီး သွားတဲ့ နေရာအတည့်ပေါ်မဟုတ်တော့ ဖုန်းလေးကို လှမ်းမြင်နေသေးတော့ နဲနဲ တော်သေးတယ်ပေါ့ .. အဲ့ဒါနဲ့ အပေါ်က passanger service သွားပြောတော့ ညဘက် ရထားတွေ အားလုံး ပြီးသွားရင် ကောက်ထားပေးမယ် ၊ ဖုန်းပျက်စီးတာ တော့ သူတို့နဲ့ မဆိုင်ဘူးတဲ့ .. ဟုတ်လည်း ဟုတ်တာပဲနော် ..း)) ဟင်း .. ညဘက်မိုးမရွာပါစေနဲ့ ဆုတောင်းရင်း လူမှာ အိပ်လို့ မပျော် .. မိုးရွာရင် ရထားမကြိတ်မိဘဲ ရထားပေါ်က ရေတွေ ကျတာနဲ့ ရေစိုပြီး အဲ့ဒါမှ တကယ် ပျက်မှာ ... >.< ...
ဒါပေမယ့် ခုတော့ ဖုန်းကမပျက်ပေမယ့် ဖုန်းထဲ ရှိရှိသမျှတွေ မနေ့ညကပဲ အကုန်ပျက်သွားပါပြီ ..
passbook ကို စမ်းချင်လို့ လျှာရှည်ပြီး IOS6သွင်းပြီး သကာလ ... လေးလိုက်တဲ့ဖုန်း ၊ ဖုန်းတစ်ခါဖွင့်ပြီး password ရိုက်ဖို့အရေး တော်တော်စိတ်ရှည်စွာနဲ့ စောင့်ရပါတယ် .. အဲ့ဒါနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ကို ပြောတော့ downgrade .. ဒါမှ မဟုတ် restore ပြန်လုပ်ကြည့် လိုက်ပါ .. ဒါပေမယ့် တစ်ချို့ aaplication တွေ နဲ့ photos တွေ တော့ ပျောက်မယ်နဲ့တူတယ်တဲ့ .. အဲ့ဒါနဲ့ photos တွေကို တော့ ကူးလိုက်တယ် .. applications တွေကတည်း တစ်ခုပဲ ၀ယ်ထားတာရှိပြီး ကျန်တာ အကုန် free ရတာတွေ သွင်းထာတာဆိုတော့ သိပ်ပြသနာ မဟုတ် ..
ဒါနဲ့ပဲ ညက အားကြိုးမာန်တတ်စွာနဲ့ restore လုပ်ရင်း ကွန်ပြူတာက ရုတ်တရက် ကျသွားလို့ ပြန်လုပ်ရင်း စုစုပေါင်းကြာချိန် ၃ နာရီလောက် အချိန်ကုန်ခံပြီး restore လုပ်လိုက်ရာက contact တွေလည်း ပျောက် ၊ application အခု ၁၅၁ မှာ အခု ၇၀ ပဲ ပြန်ရပါတော့တယ် .. ဒန့်တန့်တန့် .. -.-
((ပြောတဲ့သူကလည်း contact တွေလည်း ပျောက်ကုန်မှာ လို့ကျတော့ မပြောဘူး .း(( application (အရမ်းများနေပေမယ့် Memory 16 G မှာ 13 G လောက်ကျန်နေပါသေးတယ် )
ဟဲဟဲ .. ပျောက်တဲ့အတူတူ ဒီနေ့ညဘက် downgrade ထပ်လုပ်လိုက်ဦးမယ် .. :D
This entry was posted on 10/03/2012 12:28:00 PM and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
On October 3, 2012 at 2:58 PM , ဘုန်း၂တောက် said...
ဖတ်ရတာ ရင်တဒိတ်ဒိတ်နဲ့ ဆောင်းနှင်းရယ်။
ဆောင်းနှင်းက နေနိုင်လိုက်တာ ပစ္စည်းအသစ်ဝယ်ပြီး လေးရက်လောက် မကြည့်ဘဲ အဲဒီတိုင်း ထားတယ်ဆိုတော့လေ။ အမလေး ဘုန်းဘုန်းဆိုရင် ပစ္စည်းအသစ်ဝယ်လို့ ကျောင်းပြန်ရောက်လာရင် တစ်ခါတစ်လေ သင်္ကန်းတောင် မလဲသေးဘဲနဲ့ ၀ယ်လာတဲ့ပစ္စည်းအသစ်ကလေးကို အရင်ကြည့်တာ။
ဖတ်ရင်းနဲ့ ထိုပါးယိုးဘူတာကို မျက်စိထဲ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း ပြန်ပေါ်လာတယ်။
On October 3, 2012 at 3:44 PM , Mrs. Bagel said...
On October 3, 2012 at 5:45 PM , Anonymous said...
On October 3, 2012 at 9:17 PM , Anonymous said...
အဟင်း... ဖုန်းဖုန်းဖုန်း... အခုတော့ မလေးတော့ပါဘူး.... အဆင်ပြေသွားပြီ... :D
On October 4, 2012 at 3:26 PM , Anonymous said...
အဲ့ဒီတော့...ငါ့ နံပါတ် ပြန်ပေးရမယ်ပေါ့ ဟုတ်လား။ အလွတ်ရလား...:D
ငါ နင့် ရဲ့ ဆရာသမား :P
On October 6, 2012 at 9:28 PM , စံပယ်ချို said...
On October 8, 2012 at 9:39 AM , San San Htun said...
ဒေတာတွေ မပျောက်ဘဲ ကောင်းကောင်း ကလိနိုင်ပါစေတော်..
On October 11, 2012 at 1:50 PM , မိုးခါး said...
ပြသနာတွေတက် အို ပြသနာတွေတက် :P
On October 15, 2012 at 11:25 PM , ဆူးသစ် said...
!...* ဆောင်းနှင်းရွက် တေးခတ်သံ *...! © Design by Template Lite